Yaab !!! Mashiinka Iibinta Cuntada kulul ee TCN Ayaa Hada Kujira ~~~ - TCN
Yaab !!! Mashiinka Iibinta Cuntada kulul ee TCN Ayaa Hada Kujira ~~~
Waqtiga: 2020-01-06 Hits:
Bini'aadamku wuxuu u baahan yahay cunto si uu u noolaado, warshadaha wax-soo-saarka ayaa had iyo jeer ah baahi adag oo dadka loo qabo.
Ku dhowaad 1.4 bilyan oo qof oo ku nool Shiinaha ayaa aasaasay suuq weyn oo loogu talagalay horumarinta warshadaha cuntada.
Horumarka sayniska iyo tikniyoolajiyadda ayaa si toos ah u dhiirrigeliya hal-abuurnimada warshadaha cuntada.
Internetka, sirdoonka macmalka ah iyo xogta weyn ayaa bedelay xiriirka ka dhexeeya dukaamada iyo macaamiisha. Teknoolojiyaddu waxay noqoneysaa mid ka mid ah tartamada muhiimka ah ee maqaayadaha.
TCN waxay u heellan tahay abuurista mashiinka cuntada degdegga ah lagu iibiyo. Qalabka mashiinka cuntada lagu iibiyo ee kulul wuxuu qaataa qaabab fara badan oo is-dhexgal ah sida caqliga macmalka ah, otomaatiga iibka iyo adeegga aan lala socon iwm si kor loogu qaado isdhexgalka wax soo saarka loona keeno macaamiisha macaamiishooda khibradooda ugu dambeysa.
Horumarinta internetka guurguura, sirdoonka macmalka ah iyo fikradaha kale ee sayniska iyo teknolojiyada ah, u adeegida waxay na siineysaa meel ballaadhan oo male-awaal ah.
Marka Goobtan, sidee bay tahay in ganacsatadu ula wareegaan suuq badan?
Mashiinka iibinta cuntada kulul ee TCN waa muuqaal qurux badan oo moodle ah, kuwaas oo ah diiradda feejignaanta goob kasta. Ka xaddidan caqabadaha waqtiga iyo booska, aad ayey ugu habboon tahay iibsadayaasha.
Mashiinka iibinta cuntada kulul ee TCN wuxuu iibin karaa 60 illaa 160 sanduuq oo alaab ah, illaa 80 noocyo ah, oo buuxin kara shuruudaha gaarka ah ee dhammaan noocyada cuntada, sida bariiska sanduuqa, baastada, boorashka maraqa, khudradda shiilan, cunnada fudud iyo wixii la mid ah iibiyay.
Kaliya taabashada shayga saxda ah ee shaashadda, dooro suxuuntaada oo dhammeystir bixinta, ka dibna cuntooyinka waxay galaan kululayn, kala-bixin, ka dib la soo baxa oo ku raaxee raashinkaaga, geeddi-socodka oo dhan waa sahlan yahay oo dhakhso badan, aad ugu habboon cidda ku raaxeysata hab-nololeedka xawaaraha badan
Iyada oo cunnadu tahay udub dhexaadka, faa iidooyinka internetka ee waxyaabaha, falanqaynta xogta weyn, tikniyoolajiyadda iyo teknolojiyada macluumaadka, Mashiinka cuntada kulul ee TCN ayaa soo galay adduunka ganacsiga caqliga leh ee tafaariiqda aan lala socon. Kaliya ma ogaan karto dayactirka fog iyo maareynta, laakiin sidoo kale waxay badbaadin kartaa qiimaha shaqaalaha iyo maalgashiga raasumaalka, kor u qaadista faa'iidooyinka iyo hagaajinta waxtarka hawlgalka.
Marka maxaad sugeysaa?
Waxaan rajeynayaa inaan ku maqlo adiga.
HORETCN-suuq caqli-gal ah, dallacsiin gaar ah dhammaadka sanadka
NEXT Isbedelka Cusub ---- Mashiinka Iibinta Quraacda